टाइमटेक टीए कार्यवाही समय उपस्थिति र अनुसूची प्रबंधन को लागि
समय सुरू गर्नुहोस्, थ्रीट सुरू गर्नुहोस्
सुरक्षा कम्पनीहरू सुरक्षा गार्ड र अन्य कार्यालय कर्मचारीहरू जस्तै बिक्री र मार्केटिङ टीम, प्रशासक कर्मचारी, वित्त र आदि जस्ता बनाइन्छन्। त्यसकारण, कार्यशैलीको अधिकार र कुशलता व्यवस्थापन गर्नको लागि, सुरक्षा कम्पनीहरूको लागि एक समय उपस्थिति समाधान हुन सक्छ कि यो महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूको कर्मचारी नियमित उपस्थिति, कार्य योजनाहरू, रोस्टरहरू, परिवर्तनहरू, छुट्टिहरू र धेरै धेरै योजना बनाउँछन्। TimeTec TA एक ​​अद्भुत क्लाउड-आधारित समाधान हो जुन कम्पनीले आफ्नो वेब समाधान र मोबाइल एपको माध्यमबाट सजिलै कर्मचारी कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ। राम्रो कर्मचारी दक्षता र उच्च ROI प्राप्त गर्न, अब टाइमटेक टीए को सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सिक्नको लागि कसरी उपस्थित गर्ने र निरीक्षण गर्ने भनेर जान्नुहोस् जुन तपाईंको कम्पनीको नीति र तपाईंको देशका श्रम कानुनहरू सबै एक प्लेटफार्म, द्रुत र अधिक सही रूपमा। TimeTec TA तपाईंको कम्पनीको फाइदाको लागि उत्कृष्ट सुविधाहरूसँग लोड भएको छ!
TimeTec फायदाहरूको बारेमा बढि जान्नुहोस्
असीमित विश्वव्यापी समर्थन
TimeTec सँग एक व्यापक ग्लोबल पार्टनर नेटवर्क हो जुन समर्थन आवश्यक छ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। शीर्षमा, हामीसँग एक तकनीकी समर्थन टोली छ जुन 24/7/365 उपलब्ध छ जुन कुनै पनि समयको कुनै पनि टेक्नोलियन ग्लिचहरूमा।
उद्योगमा कम अनुभव
TimeTec समय र उपस्थिति प्रणाली विकासमा 17 वर्ष भन्दा बढी अनुभव छ र हामी ती सबै अनुभवहरू प्रयोग गर्दैछौं तपाईंको फाईदाहरूको उत्तम समाधान प्रदान गर्न।
न्यूनतम लागतमा दुवै डाटाबेस र फाइल भण्डारणको समर्थन गर्दछ।
तपाईंको सबै डाटा हाम्रो साथ सुरक्षित छ र हामी सबै2वर्ष लाइभ डाटा र हाम्रो सदस्यता लागतमा हाम्रो सर्भरमा3वर्ष संग्रहित डाटा राख्नेछौं। डेटाबेस र TimeTec TA को फाइल स्टोरेज समर्थन गर्न हाम्रो लागी माथिको कुनै अतिरिक्त लागत छैन।
आईटी रखरखाव र अपग्रेड लागत हटाउनुहोस्
TimeTec TA एक ​​क्लाउड-आधारित समय उपस्थिति समाधान हो जुन तपाईंको कम्पनीलाई रखरखाव शुल्क वा कुनै अपग्रेड लागतको लागि अधिक पैसाको लागि आवश्यक छैन किनकि प्रणाली विकासकर्ता को रखरखाव पछि रहेको छ र प्रणाली सधैँ अपग्रेड गरिएको छ।
कम उपफन्ट पूंजी लगानी
तपाईंले हार्डवेयर, जस्तै सर्भर, पीसी, रूटर र यस्तो हार्डवेयरको बारेमा विचार गर्न आवश्यक छैन किनकि टाइमटेक टीए तपाईंलाई चिन्ता गर्नको लागि आवश्यक छैन। जब तपाइँ टाइमटेक टीएमा साइन अप गर्नुहुन्छ, तपाइँ वेब ब्राउजर मार्फत वा तपाईंको स्मार्टफोन मार्फत पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, र सबै डेटा क्लाउड सर्भरमा हेरफेर र जोखिमबाट टाढा रहन्छ।
अनुमानित मासिक भुक्तानी
त्यहाँ लागतको शर्तमा कुनै आश्चर्य हुने छैन किनभने सदस्यताको मूल्य निश्चित छ र तपाइँले तपाइँका आवश्यकताहरु लाई तपाईको प्रयोगमा मापन गर्दछ। तपाईं निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ वा माथिको मापन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँले कुनै पनि गोपनीय शुल्क बिना हरेक महिना तिर्नु भएको पैसा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ।
TimeTec TA App यसलाई सजिलो बनाउनुहोस्
स्मार्टफोन अनुप्रयोग टाइमटेक टीए मोबाइल आईफोन र एन्ड्रोइड फोनहरूको लागि मोबाइल घडी र एडमिन र प्रयोगकर्ताहरूको डेटा हेर्नको लागी उपलब्ध छ, सबैको लागि चीजहरू सजिलो बनाउछ।
कुनै पनि समय, उपलब्धता पनि
क्लाउड-आधारित सफ्टवेयरको सौन्दर्य हो कि डेटा स्थानद्वारा बाहिरी छैन। TimeTec TA को सदस्यता लिन, तपाईं कुनैपनि समयमा आफ्नो डेटा पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ जुन इन्टरनेट जडान भएको छ।
अनुकूलतम Uptime र प्रणाली विश्वसनीयता
TimeTec एक सेवा स्तर सम्झौता छ जसले यसको सबै विश्वव्यापी क्लाइन्टहरूमा इष्टतम अपटाइम र प्रणाली विश्वसनीयताको ग्यारेन्टी दिन्छ। https://www.timeteccloud.com/sla
सुरक्षित, अनावश्यक र पर्यावरण संवेदनशील डेटा केन्द्र
TimeTec अमेजन वेब सेवाहरूसँग सहकार्य गर्न हाम्रो सबै ग्राहकहरूलाई सुरक्षित, अनावश्यक र पर्यावरणीय चेतना डेटा केन्द्र प्रदान गर्न। र टाइमटेक CMMI स्तर3प्रमाणीकरण संग सम्मानित गरिएको छ र हामी कम्पनी को लागि एक प्रभावी सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित गर्न 27001 को अनुसरण गर्दै छन्।
सानो देखि बहुराष्ट्रीय कम्पनीको लागि उपयुक्त
TimeTec TA को 10 भन्दा बढी भन्दा बढी कर्मचारीको बल कम्तिमा 10 भन्दा कम कम्तिमा कम्पनीहरु को एक विस्तृत सरणी को लागि डिज़ाइन गरिएको छ। समाधान मा एक समयबद्ध क्षमता र लचीलापन छ कि विभिन्न कम्पनीहरु को आवश्यकताहरु संग फिट हुन सक्छ
साइन अप गर्नुहोस्, प्रणाली सेटिङ्हरू प्रबन्ध गर्नुहोस्, प्रयोगकर्ताहरू थप्नुहोस् र तपाईं जान्नुहुन्छ। TimeTec TA को कार्यान्वयन छिटो छ र उपयोगी जादूगरहरु को सहयोग संग सजिलै संग गरिन सक्छ। तपाईंको कम्पनीको लागि के राम्रो छ निर्धारण गर्नुहोस् र तपाईंको आवश्यकताहरुसँग मेल खाने प्रणाली सेट गर्नुहोस् र तपाईंको कर्मचारीले यसलाई प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस्।
एक केन्द्रीयकृत प्रणाली मा एकाधिक फिंगरटे टर्मिनल को समर्थन गर्दछ
TimeTec TA धेरै घडी विकल्पहरू प्रदान गर्दछ र यो मध्ये एक फिंगरटेक द्वारा बायोमेटिक्स छ। समाधान डेटा संग्रह को लागि एक केंद्रीयकृत प्रणाली मा एकाधिक बायोमेटिक्स टर्मिनलों को तैनात गर्न सक्छन्।
1. के TimeTec TA को लागि स्थानीय समर्थन उपलब्ध छ?
हो। TimeTec TA को लगभग 120 देशहरुमा 200 देखि अधिक अधिकृत पुनर्विक्रेताहरु छन्। कृपया ती देशहरूमा जाँच गर्नुहोस् जहाँ टाइमटेक टीए पुनर्विक्रेताहरू अवस्थित छन्। तपाईं हामीलाई ईमेल, MSN, स्काइप, Google को माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 24 घण्टाको लागि, हप्ता साल-राउन्ड सेवा।
2. TimeTec TA सर्भरको स्थान कहाँ छ?
वर्तमान में, टाइमटेक टीए प्लेटफर्म संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिम क्यालिफोर्निया मा स्थित छ।
3. के तपाइँ आफ्नै क्लाउड प्लेटफर्म सेट अप गर्नुहुन्छ, वा तपाइँ तेस्रो पक्ष विक्रेतासँग काम गर्नुहुन्छ?
TimeTec TA हाल अमेजन EC2 सँग काम गर्दै हुनुहुन्छ जुन हाम्रो क्लाउड प्लेटफर्म प्रदायकको रूपमा कार्य गर्दछ।
4. TimeTec TA को लागि अपटाइम ग्यारेन्टी के हो?
कृपया क्लिक गर्नुहोस् यहाँ थप जानकारीको लागि।
5. के टाइमटेक मोबाइल एप्स र वेबको बीच डेटा सिङ्क तुरुन्तै हुन्छ?
निश्चित रूपमा! यद्यपि, यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कि कुनै पनि सिंक गर्दैछ, स्क्रिन ताजा गर्नुहोस् र आवाज!
6. के मलाई टाइमटेक अनुप्रयोग किन्न चाहन्छ वा यसको कुनै पनि इन-एप खरीद गरेको छ?
टाइमटेक मोबाइल एप आईओएस वा GooglePlay बाट नि: शुल्क स्थापित गर्न सकिन्छ तर तपाईं टाइमटec TA को सदस्यता लिँदा मात्र यो पूर्णतया उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
7. TimeTec TA कार्यान्वयनको लागि आवश्यक समय के हो?
त्यसोभए हामीले सोध्नु पर्छ कि तपाईंको कम्पनी कति कितने कर्मचारी छ र तपाईंको समय तालिका कति जटिल छ? TimeTec TA को कार्यान्वयन दुई प्रश्नहरु को उत्तर मा अधिक अत्यधिक निर्भर गर्दछ, तपाईं यसलाई घंटों को मामला मा या एक ठूलो संगठन को लागि यसलाई प्राप्त गर्न सक्छन् केहि हफ्ते हुन सक्छ। कुनै चिन्ता छैन, टाइमटेक समर्थन त्यहाँ तपाईलाई सहयोगको लागि सधैँ हुनेछ।
8. मेरो क्लाउडमा मेरो डेटा कति सुरक्षित छ?
चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी तपाईंको डेटा सुरक्षित राख्न आवश्यक प्रक्रियालाई तैनात गर्दछौं र हाम्रो क्लाउडमा तपाईंको डेटा व्यवस्थापन गर्नको लागि पर्याप्त रिकभरी योजनाहरू छन्।
9. के मलाई टाइमटेक टीए प्रयोग गर्न प्रणाली आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक छ?
सौभाग्य देखि, नहीं। TimeTec TA सबै ब्राउजर र सबै मोबाइल यन्त्रहरूमा काम गर्दछ।
10. मैले टाइमटेक टीए कहाँ खरीद गर्न सक्छु? यदि म विदेशी छु भने, म अझै पनि तपाईंको उत्पादन प्रयोग गर्न सक्छु?
यस क्लाउड युगमा, तपाईंसँग इन्टरनेट जडान नभएसम्म, हाम्रो उत्पादन त्यहाँ छ।
1. के FingerTec टर्मिनल आवश्यक छ यदि म टाइमटेक टीए प्रयोग गर्न चाहन्छु?
फिंगरटेक टर्मिनल आवश्यक छैन यदि तपाईं टाइमटेक टीए प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। एक विकल्पको रूपमा, तपाईं आफ्नो आईफोन वा एन्ड्रोइड ग्याजेटहरूमा टाइमटेक मोबाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाइँले तपाइँको वेब चेक-इनलाई कुनै पनि कम्प्युटरमा तपाइँको उपस्थितिमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तर आजकल, "मित्र-छिद्रण" गतिविधिहरू रोक्न घडीमा उपस्थित हुनका लागि धेरै र अधिक कम्पनीहरूले बायोमेट्रिक्स टर्मिनलहरू छनौट गर्दैछन्, र केहि पनि उद्देश्यको लागि आरएफआईडी कार्ड टर्मिनलहरू छनौट गर्न सक्छन्।
2. के म FingerTec ब्रान्ड को सट्टा टाइमटेक टीए को लागि बायोमेटिक्स र / या आरएफआईडी टर्मिनल को अन्य ब्रान्डहरुको उपयोग गर्न सक्छु?
नहीं। TimeTec TA बायोमेट्रिक्स टर्मिनल को अन्य ब्रान्डहरुको समर्थन गर्दैन। फिंगरटे टर्मिनलहरू टाइमटेक टीएसँग प्रयोग गर्न विश्वसनीय छन्, किनकि तिनीहरू पूर्णतया परीक्षण र सहज समाधानमा एकीकृत हुन्छन्।
3. म कहाँ फिंगरटेक टर्मिनलहरू खरीद गर्न सक्छु र म स्थानीय सहयोग कहाँ पुग्छु?
सबै टाइमटेक टीए नियुक्त गरिएको स्थानीय अधिकृत पुनर्विक्रेताहरू फिंगरटेक समाधानसँग राम्ररी उत्कृष्ट छन्। त्यसोभए, तपाईं फिंगरटेक टर्मिनलहरू खरिद वा भाडा लिन सक्नुहुन्छ र स्थानीय समर्थन प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
4. कसरी विश्वसनीय छन् फिंगरटे टर्मिनल समय घडीहरू?
सामान्यतया सफ्टवेयर घरहरू धेरै कार्यशैली क्लाउड सेवाहरू प्रदान गर्दछ जुन बिना उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विश्वसनीय हार्डवेयर र बिक्री र प्राविधिक समर्थन सञ्जाल प्रदान गर्दछ। ब्रान्ड फिंगरटेक र यसको समय उपस्थिति र पहुँच नियन्त्रण उपकरणहरूको दशौं भन्दा बढीका लागि बजारमा रहेको छ र ब्रान्डले उच्च गुणस्तरमा उत्पादन र समर्थन गुणस्तर पाएको छ।
1. कार्यान्वयन लागत को कम गर्न प्रयोगकर्ताहरुको सही संख्या द्वारा लाइसेन्स गिनन को सट्टा 10 प्रयोगकर्ताहरु को एक ब्लक द्वारा टाइमटेक टीए चार्ज गर्ने तर्क के हो?
कर्मचारी कारोबार कहिल्यै स्थिर छैन र सँधै कम्पनीमा परिवर्तन गर्दछ। हरेक नयाँ भर्तीको लागि व्यक्तिगत इजाजतपत्र चार्ज गर्न सजिलो छ किनकी तपाईंलाई प्रणालीमा दर्ता गर्न सक्नु अघि TimeTec TA लाइसेन्स सब्सक्रिप्शन र भुक्तानी प्रक्रिया को माध्यम ले जानु पर्छ, वा तपाईंलाई प्रयोगकर्ता लाइसेन्स रद्द गर्न आवश्यक छ भने इस्तीफा प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ता इजाजतपत्र प्रति ब्लकमा 10 प्रयोगकर्ताहरू चार्ज गर्ने बेलामा कुनै कम्पनीले कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न केही अतिरिक्त इजाजतपत्रहरू निश्चित गर्नेछ। TimeTec TA लाइसेन्स सदस्यता शुल्क प्रति महिना USD2 प्रति प्रयोगकर्ता मात्र हो, बजारमा तुलनात्मक तल्लो, र समूहका इजाजतपत्रहरूको एक इकाईको रूपमा कम्तिमा 10 प्रयोगकर्ताहरू हाम्रो लगानी र तपाईंको लागि उच्च गुणस्तर र विश्वसनीय प्रणाली प्रदान गर्न प्रतिबद्धता प्रदान गर्न मात्र।
2. यदि मेरो कम्पनीमा एक वर्षको सदस्यता बिलिंग चक्र छ, र वर्षको बीचमा, हामी केहि नयाँ कर्मचारीहरू भागेछौं र हामी अतिरिक्त प्रयोगकर्ता इजाजतपत्रबाट बाहिर निस्क्यौं। के म नयाँ प्रयोगकर्ता समूह इजाजतपत्र खरीद गर्न सक्छु र अझै मेरो बिलिङ चक्रसँग सिङ्क गर्न सक्छु?
हो, तपाईले कुनैपनि समयमा नयाँ प्रयोगकर्ता समूह इजाजतपत्र सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ, र तपाईंको बिलिङ चक्रको म्याद समाप्त हुने मिति (मासिक गणना गरिएको) लाई सिंक गर्नुहोस्। तपाईं तपाईंको अवस्थित समाप्ति मितिको बाँकी महिना अनुसार शुल्क लगाइनेछ। रिवर्समा, यदि तपाइँ कर्मचारी कमजोरीको कारणले तपाइँको प्रयोगकर्ता समूह इजाजतपत्र घटाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ सदस्यता समाप्त गर्न र फिर्ता रकम USD10 को प्रशासन शुल्क र तदनुसार बैंक चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
नोट: सब्सक्रिप्शन डिस्काउंटको अवधि थप प्रयोगकर्ता समूह इजाजत पत्र सदस्यताको लागी बिलिङ साइकल बीचमा लागू छैन।
3. के तपाईंसँग कुनै टर्मिनल सेटअप शुल्क छ?
होइन, हामी टर्मिनल सेटअप शुल्क लागू गर्दैनौं।
4. के मेरो नि: शुल्क परीक्षण डेटा मेरो सेटअप खातामा हस्तान्तरण गरिएको हुन सक्छ प्रणाली सेट अप र डेटा प्रविष्टिमा दोहोरो कार्यमा बचत गर्न?
निश्चित रूपमा। हाम्रो प्रणाली नि: शुल्क परीक्षण डाटा पुनः दोहोर्याइएको डेटा प्रविष्टि र प्रणाली सेटअपबाट जोगिन सदस्यता लिङ्क गर्न अनुमति दिन डिजाइन गरिएको थियो।
5. मेरो कम्पनीले हाल फिंगरटे टर्मिनलहरू प्रयोग गरिरहेको छ, के म नि: शुल्क परीक्षण अवधिको समयमा टर्मिनलहरूलाई टाइमटेक टीएमा एकीकृत गर्न सक्छु?
नि: शुल्क 10 प्रयोगकर्ता इजाजत पत्र
1. म टाइमटेक TA को नि: शुल्क 10 उपयोगकर्ता इजाजतपत्र को लागि मलाई प्रमाणित गर्न को लागि कुनै पनि FingerTec biometrics टर्मिनल खरीदना चाहिए?
तपाईंलाई नि: शुल्क समय Tec TA प्रयोगकर्ता-इजाजत पत्र ब्लक प्राप्त गर्न को लागी तपाइँले हामीलाई कुनै पनि टर्मिनलहरू खरीद गर्न आवश्यक छैन। प्रत्येक फिंगरटे ग्राहकले स्वचालित रूपमा टाइम टेक टाएको ब्लकमा निःशुल्क 10 प्रयोगकर्ताहरूको इजाजत पत्र समावेश गर्दछ।
2. के मैले थप निःशुल्क ब्लकहरू गर्न सक्छु यदि मैले तपाईलाई अधिक FingerTec टर्मिनलहरू खरीद गर्दछु?
नहीं, एक कम्पनी केवल हार्डवेयर खरीद को राशि या फिंगरटेक या फिंगरटैक को पुनर्विक्रेता देखि खरीद को आवृत्ति को बावजूद मुफ्त ब्लक को हकदार हो। यद्यपि, यदि तपाईं 10 भन्दा बढी प्रयोगकर्ता लाइसेन्समा परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि जानकारी @timeteccloud.com मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
3. के हामी यी नि: शुल्क इजाजतपत्र प्राप्त गर्न क्रेडिट कार्ड जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक छ?
आफ्नो वालेट अझै सम्म नपठाउनुहोस्; हामी यस नि: शुल्क खाताको लागि कुनै क्रेडिट कार्डको जानकारी आवश्यक छैन, विश्वास गर्नुहोस्, यो निःशुल्क छ। यद्यपि, तपाइँले केहि थप इजाजतपत्रहरू थप्न निर्णय गरेपछि, हामी बारे जानको लागि धेरै भुक्तानी विधिहरू प्रस्ताव गर्दछौं।
4. के मैले आफ्नो कम्पनीको लागि एक भन्दा बढी नि: शुल्क 10 प्रयोगकर्ता इजाजतपत्र खाता सिर्जना गर्न सक्छ र सदस्यता भुक्तान गर्नबाट बच्न सबै कर्मचारीको डेटा सिंक गर्न सक्छु?
तपाईंलाई त्यसो गर्न अनुमति छैन, किनभने प्रत्येक कम्पनीले 10 प्रयोगकर्ता इजाजतपत्रहरूसँग मात्र एक टाइमटेक टीए नि: शुल्क खाताको अधिकार छ। यो कम्पनीको लागि परेशानी हो जुन सञ्चालनमा धेरै खाताहरू राख्दछ र सबै कर्मचारीको डेटा सिंक गर्न को लागी गहन छ। हाम्रो निःशुल्क-इजाजतपत्र नीतिको कुनै पनि उल्लङ्घनले तपाइँको धेरै नि: शुल्क प्रयोगकर्ता इजाजतपत्र खाताहरू निलम्बन गर्न सक्छ।
5. के यो डेटा असक्षम भए तापनि राखिनेछ?
हो, हामी तपाईंको खाता निष्क्रिय छ जब पनि डेटा राख्दछ तर तपाईंको खाताको निष्क्रियतामा तपाईंलाई सजग गर्न प्रयासहरू लिइनेछ।
6. के मैले यो निःशुल्क खाता प्रयोग गरिरहेको छु भने म पूर्ण समर्थन प्राप्त गर्नेछु?
हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई छोड्नेछौं; हाम्रो प्राविधिक टोलीले तपाईंलाई सधैं हाम्रो पूर्ण सहयोग प्रदान गर्नेछ किनकि हामी सबै टाइमटेक TA खाता प्रयोगकर्ताहरूको समान व्यवहार गर्दछौं; प्रयोगकर्ताका विशेषाधिकारहरू।
7. के नि: शुल्क खातासँग पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको खाता जस्तै समान छ?
हो, केही पनि लुकेको छ वा असक्षम भएको कारण किनभने खाता निःशुल्क छ। हामी दृढ विश्वास गर्छौं कि यस नि: शुल्क खाताको साथ कम्पनीहरू प्रदान गरेर, उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न समग्रमा सफ्टवेयरको फाइदा अनुभव गर्न सक्छन्, र समय मा, टाइमटेक टीएलाई कम्पनी बढ्छ जस्तै आफ्नो कर्मचारीलाई सम्भालना समाधानको रूपमा लिन सक्दछ।
8. यदि म अवस्थित प्रयोगकर्ता मेटाउँछु भने, मेटाईएको एक प्रतिस्थापन गर्न अन्य प्रयोगकर्ता सिर्जना गर्न सक्छु?
न। हामीले तपाइँलाई एक खातामा 10 प्रयोगकर्ता लाइसेन्स निःशुल्क प्रदान गर्यौं र यी प्रयोगकर्ताहरू निश्चित छन्। यदि तपाइँ लामो समयको लागि यो प्रणालीको प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, सावधानी छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ता सूचीमा समावेश गर्न चाहानुहुन्छ।
9. के हो भने मलाई कर्मचारीहरूको डेटा चाहिएको छ जुन म मेटाउन चाहन्छु?
तपाईंले मेटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नु अघि कर्मचारीको हरेक डेटा निर्यात गर्न आवश्यक छ।
10. यदि म अधिक खरीद गर्न चाहन्छु भने टाइमटेक टीए इजाजत पत्रहरूको लागि थप छूट छ?
निश्चित रूपमा। यदि तपाइँ प्रयोगकर्ता लाइसेन्सको अतिरिक्त अतिरिक्त खरिद खरिद गर्नुहुन्छ, वार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्नुहुनेछ तपाईंलाई निःशुल्क 1 ब्लक खाताको माथि अर्को 10% छुट दिनुहुनेछ। TimeTec टीए मूल्य निर्धारण http://www.timetecta.com/pricing को बारे मा अधिक जानें
1. के परीक्षण खाताको लागि साइन अप गर्न सजिलो छ?
अँ साञ्ची! तपाईले भर्खरै साइन इन UP हाम्रो वेबसाइटमा र केहि महत्त्वपूर्ण विवरणहरू भर्नुहोस् र तपाईं जाने राम्रो हुनुहुन्छ।
2. एक पटक मेरो परीक्षण अवधि समाप्त भएपछि, के तपाईं मलाई चार्ज सुरु गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
निश्चित रूपमा होइन। जब हामी तपाईंलाई क्रेडिट कार्ड जानकारीको लागि कहिल्यै सोध्दैनौँ, हामी समाधानको लागि तपाईँलाई शुल्क लगाउने छैनौं र तपाईं स्वत: नामाकरण हुने छैनौँ। तर, यदि तपाइँ अझै पनि टाइमटेक टीए प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, जीवनको लागि त्यो पहिलो 10 प्रयोगकर्ता इजाजत पत्र तपाईको कम्पनीको लागि निःशुल्क छ।
3. के तपाईं केवल परीक्षणको बेला वेबमा मेरो पहुँच सीमित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
निश्चित छैन! हामी तपाइँलाई पुरा समय TimTec TA अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ ताकि तपाईं वेब, अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाइँसँग फिंगरटेक बायोमेट्रिक यन्त्रहरू छन्, तपाइँ तिनीहरूलाई पनि जडान गर्न सक्नुहुनेछ।
1. म अनलाइन भुक्तान लेनदेन गर्न चाहानुहुन्छ। के म अन्य भुक्तानी मोडहरू प्रयोग गर्न सक्छु?
हो। तपाईं हाम्रो स्थानीय अधिकृत पुनर्विक्रेतामा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्थानीय पुनर्विक्रेताबाट भुक्तानी प्राप्त गरेपछि हामी तपाईंको सदस्यता खाता सक्रिय गर्नेछौं।
2. म स्थानीय मुद्रामा तिर्न चाहानुहुन्छ, मैले के गर्नुपर्छ?
हामी अमेरिकी डलरमा सदस्यता शुल्क चार्ज गर्दछौँ। यदि तपाईं आफ्नो स्थानीय मुद्रा प्रयोग गरेर तिर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो स्थानीय अधिकृत पुनर्विक्रेताहरूमा भुक्तानी गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ। तर कुल रकम अमेरिकी डलरको विरुद्ध तपाईंको स्थानीय मुद्राको विनिमय दरमा आधारित हुनेछ।
3. के मैले अनलाइन ऑनलाइन भुक्तानी गर्दा बैंक शुल्क तिर्न आवश्यक छ?
न। तपाईलाई बिलिङमा सहि रकम तिर्न आवश्यक छ।
4. म टाइमटेक टीए बाट चालान कसरी कति पटक प्राप्त गर्नेछु?
TimeTec TA एक ​​SaaS सदस्यता मोडेल हो जसले तपाईंको भुक्तानी चक्र निश्चित गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं वार्षिक रूपमा अग्रिम तिर्न चाहानुहुन्छ वा तपाईं अर्ध-अर्ध तिर्न चाहानुहुन्छ, हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
5. केहि समय मा म समयTec TA मा खरीद छ निश्चित या यो स्केलेबल छ?
TimeTec TA लचीला छ र तपाईं आफ्नो आवश्यकताहरु मा आधारित आफ्नो खरीद समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं इजाजत पत्र थप्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ र यदि तपाईं पनि कम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं सक्नुहुन्छ। चीजहरू खरिद नगर्नुहोस्।
6. म टाइमटेक टीए कसरी खरीद गर्छु?
तपाईं अनलाइन लाइसेन्स खरिद गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ वा यदि तपाइँले तपाइँलाई डोऱ्याउन चाहानुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईलाई स्थानीय कम्पनीमा जडान गर्न सक्दछौं जुन तपाईलाई चाहिने आवश्यकता निश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले जो पनि छनौट गर्नुभयो भने, कृपया हामीलाई थाहा छ कि हामी यहाँ सहयोगको लागि छौं।
1. मेरो कम्पनीले यसको सदस्यता समाप्त गर्ने बेलामा कुनै फिर्ता रकम प्राप्त गर्न सक्दछ?
हो, तपाईले अनावश्यक सदस्यता को लागि रकम फिर्ता गर्न सक्नुहुनेछ जो मासिक रुपमा गणना गरिन्छ USD 10 र बैंक शुल्क को प्रशासन शुल्क।
यदि तपाइँको सदस्यता अधिकृत पुनर्विक्रेतामा तपाईंको सदस्यता शुल्क भुक्तान गरिएको छ भने, तपाइँलाई आफ्नो सदस्यता समाप्त गर्न मद्दत गर्न र तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई फिर्ता गर्न पाउनु पर्छ तिनीहरूलाई सूचित गर्न।
2. के मैले कम्पनीको डेटा पुन: प्राप्त गर्न सक्दिन जब हाम्रो कम्पनीले टाइमटेक टीएको सदस्यता समाप्त गर्न निर्णय गरेको थियो?
हो, हामी तपाईंलाई तपाईंको दर्ता इमेल मार्फत लिङ्क पठाउनेछौं तपाईंको CSS ढाँचामा तपाईको डेटा डाउनलोड गर्नका लागि। यो सिफारिस गरिएको छ कि तपाईं प्रासंगिक डेटा डाउनलोड 45 दिनको अवधिको समयमा। अनुग्रह अवधि पछि, हामी हाम्रो सर्भरबाट तपाईंको डेटा हटाउनेछौं र डाटाको कुनै हराएको पश्चात्ताप पछि अफसोस हुन्छ।
3. के मेरो कम्पनीले पहिले नै समाप्त गरेको बेला मेरो सदस्यता नवीकरण गर्न सक्छ?
तपाईंको सदस्यताको पुन: नविकरण अनुमोदन पछि 45 दिन अनुग्रह अवधि भित्र उपलब्ध छ। त्यस पछि, तपाईंको डाटा हाम्रो सर्भरबाट हटाइनेछ, र तपाईंलाई नयाँ सदस्यताको साथ सुरू गर्न र सबै प्रणाली सेट अप प्रक्रिया फेरि जानुहोस्।
1. मैले टाइमटेक टीएए को लागि तकनीकी सहायता कसरि प्राप्त गर्न सक्छु?
हाम्रो टेक्नोलजी टीम LiveChat मार्फत पहुँचयोग्य छ, टाइमटेक टीए सफ्टवेयरमा सजिलै उपलब्ध उपलब्ध च्यानल च्यानल र तिनीहरू पनि अग्रिम जवाफको लागि support@timeteccloud.com मा इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ। TimeTec TA समर्थन 24 घन्टा, हप्ता7दिन, सबै वर्षको राउन्ड उपलब्ध छ
2. म TimeTec टीए संग परिचित छैन। मेरो खाता सेटअप गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका के हो?
कार्यान्वयन जादूगर तपाईलाई सहयोग गर्न हुनेछ। तपाईले गर्नु आवश्यक छ कि प्रदान गरिएका निर्देशनहरू पालना गर्न र तपाईं कुनै पनि समयमा आफ्नो खाता सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ। यदि कुनै पनि अवस्थामा तपाईं अटक भएको छ भने सहयोग सहायताको लागि उपलब्ध छ।
3. के म आफ्नो अवस्थित डाटा TCMS बाट TimeTec TA लाई माइग्रेट गर्न सक्छु?
हो, हामीले तपाईको खाता स्थापना गर्न सहयोगको लागि माइग्रेशन विजार्ड तयार गरेका छौं।
4. म TimeTec टीए मा अधिक बुझ्न चाहन्छु। के त्यहाँ भाग लिन सक्ने प्रशिक्षण छ?
हामी हरेक महिना वेबिनार सत्रको समय समयको लागि व्यवस्थित गर्दछौं। तपाईं समाधानमा थप बुझ्नको लागि सामेल हुन स्वागत छ। सत्र नि: शुल्क छ, तर तपाईंलाई सत्रमा सामेल हुन अघि आफ्नो सीटहरू आरक्षित गर्न आवश्यक छ। वेबिनार सत्रहरूको तालिका यहाँ उपलब्ध छ ।
अवस्थित TCMS v2 प्रयोगकर्तामा
1. म हाल फिंगर Tec TCMS v2 सफ्टवेयर प्रयोग गर्दैछु, म सफ्टवेयरको समय उन्नयन गर्नुपर्छ TT TA या TCMS V2 मेरो आवश्यकताहरूको लागि पर्याप्त छ?
माइग्रेसन अनिवार्य छैन यदि TCMS V2 ले तपाइँका हालको आवश्यकताहरू फिट राख्दछ र क्लाउड-आधारित समाधान तपाइँको प्राथमिक सूचीको शीर्षमा छैन। TimeTec TA ले केहि प्रमुख विशेषताहरूसँग क्लाउड आधारित समाधानहरू हाइलाइट गर्दछ, जुन TCMS V2 बाट अनुपस्थित छन्। यदि तपाईंको समाप्तिबाट अनुकूलन रिपोर्टहरू, बहु-स्तरीय प्रयोगकर्ता पहुँच अधिकार आदि जस्ता सुविधाहरू समावेश गर्न सकिन्छ भने, र तपाईंको टाइमटेक टीएकार्यान्वयन गर्न बजेट छ, हामी अत्यधिक TCMS V2 बाट टाइमटेक टीए सम्म अपग्रेड सिफारिस गर्दछौं।
2. TCMS V2 मा सबै सुविधाहरू टाइमटेक टीएमा उपलब्ध छन्?
TimeTec TA ले सबै TCMS V2 समय उपस्थिति सुविधाहरू र अधिक धेरै समावेश गर्दछ! यसको माथि, सफ्टवेयर सजिलै नेविगेट गरिएको छ, तपाईलाई लागू गर्न र सुविधाहरू सजिलैसँग आवश्यक छ प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईंको स्मार्टफोनबाट तपाईंको उत्तेजना दृढता व्यवस्थापन गर्नुहोस्
प्रत्येक कर्मचारीले एप मार्फत आफ्नो प्रदर्शन देख्न सक्छ र यसले नियोक्ता र कर्मचारीहरूको बीच डाटा पारदर्शिता सिर्जना गर्दछ।
कम्पनीहरू अनुप्रयोगहरू जस्तै बेकन, जीपीएस र एनएफसी भित्र विभिन्न घडी विकल्पहरूसँग प्रस्तावित छन्, रिंगटोन उपकरणको रूपमा फिंगरटेक बायोमेटिक्सको शीर्षमा।
टाइमटेक अनुप्रयोगले क्यालेन्डर दृश्यको साथ आउँछ जुन प्रत्येक स्टाफको कार्य तालिका र घडीको समय विवरण गर्दछ।
कर्मचारीले एपमा स्वीकृति अनुरोध सुविधा मार्फत, कुनै पनि उपस्थिति समय विसंगति परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्न सक्छ।
कार्यपालिका भित्र उपस्थिति को निगरानी गर्दा टाइमटेक टीए एप संग सजिलो र सावधानी हो
तपाईंको सन्दर्भका लागि स्मार्टफोनबाट सीधा रिपोर्टहरू हेर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्
TIMETEC TA NOW लाई सदस्यता लिनुहोस्